Sports bhodhoro remvura Vagadziri & Suppliers - China Mitambo yemvura bhodhoro Factory
Kunze mitambo yemvura bhodhoro
Inotakurika bhodhoro remvura yemitambo yekunze.Inogona kuiswa nyore muhombodo yechiuno, uye bhegi rinogona kuzadza unyoro chero nguva uye kupi zvako.Iyo compact dhizaini haikonzeri chero mutoro kune iyo yekurovedzera.
Fitness Bhodhoro Eco Hushamwari Hwepamusoro-mhando yeMvura Bhodhoro
Iro bhodhoro remvura rekunze remitambo rakagadzirwa nezvinhu zvakatipoteredza rakareruka, riri nyore kutakura uye riri nyore kushandisa pane zvakajairika mabhodhoro emvura.Inokodzera mitambo yakawanda yekunze inoda kukurumidza hydration.Zvakadai sekumhanya, kukwira, kusimba, kudzidzira uye zvichingodaro.Iyo zvakare ine hushamwari hwakatipoteredza, uchishandisa chikafu-giredhi zvinhu uye hapana BPA.
Yakakura Kuvhura Kunze Kwemitambo Bhodhoro neHandle
Bhodhoro remitambo yekunze ine mubato uye chifukidziro cheguruva, izvo zvisingangoiti kuti zvive nyore chete asiwo zvinovandudza kuchengeteka.Kuenzaniswa nemaketani akajairwa, inogara yakasimba, yakachengeteka uye yakavimbika, uye yakanakira inishuwarenzi.Yakakodzera kwazvo kumitambo yekunze kana kushandiswa kwevadzidzi.Kukwanisa kuri pakati nepakati kwe500 ml.Zviri nyore kutakura paunenge uchisangana nezvinodiwa zve hydrating.
Yakajeka Plastiki Tsika yekunwisa Bhodhoro BPA Yemahara
Bhodhoro guru remitambo ine silicone mubato.Muviri wemukombe une arc-yakaita dhizaini, iyo mukombe muviri wakatenderedza, mitsetse yakatsetseka, uye ergonomic dhizaini iri mumutsara.Iyo yekusveta muromo inoshongedzerwa neguruva chivharo, iyo yakachengeteka uye ine hutsanana.
Sport Bottle Plastic BPA Yemahara Cycling Fitness Kumhanya
A 1000ml hombe yemitambo bhodhoro.Inogona kuzadzisa zvizere zvido zvako zvekuzadza mvura.Kunyangwe iwe uri kuchovha bhasikoro mumugwagwa, uchimhanya pagungwa, kana kudzidzira mujimu.Inogona kushanda semubatsiri wako we hydrating uye kukuchengeta uzere nehupenyu nguva dzese.